Iwotshi Iwotshi ibonakaliswa nge-zeitgeist, enxulunyaniswa nezixhobo ezifanelekileyo, zobugcisa kunye nezixhobo ezihlala ixesha elide. Ubuso obuphezulu beemveliso bubonakaliswa ngumzimba we-semi torus yekhabhoni kunye nokubonisa ixesha (imingxunya yokukhanya). I-Carbon ithatha indawo yensimbi, njengenxalenye yexesha elidlulileyo kwaye igxininisa inxenye yomsebenzi wewotshi. Ukungabikho kwenxalenye esembindini kubonisa ukuba isibonakaliso esivelisayo se-LED sibuyisela umatshini wewashi yeklasi. Isithambisi esibuyileyo esibuyile sinokuhlengahlengiswa ngumbala owuthandayo womniniyo kwaye inzwa ekhanyayo iya kujonga amandla okukhanya.
Ukutya Okondla Ukutya
Ukutya Okondla Ukutya Ukutya okondla ngokutya ngakumbi akuneli nje ekuncedeni abantwana batye bodwa, kodwa kukwathetha ukuzimela ngakumbi kubazali. Iintsana zingazibamba zodwa kwaye zincancise kwaye zihlafunze emva kokuba uchithe ukutya okwenziwe ngabazali. Ukutya kwesondlo esibonakalayo kunye nokutya okune-silicone enkulu ekwaziyo ukwanelisa umdla wokutya kwabantwana. Yindlela yokondla eyimfuneko kwaye ivumela abancinci ukuba baphonononge kwaye bakonwabele ukutya okuqinileyo okutsha ngokukhuselekileyo. Ukutya akufuneki kucocwe. Beka nje ukutya kwi-silicone sac, vala isiciko se-snap, kwaye iintsana ziyakonwabela ukuzondla ngokutya okutsha.
Inkqubo Yodonga Oluninzi Oluninzi
Inkqubo Yodonga Oluninzi Oluninzi Inkqubo yodonga lwendlu ye-GLASSWAVE ye-multaxial ivula umnyango ukuba uguqulwe ngakumbi xa uyila iindonga zeglasi zemveliso yobuninzi. Olu luvo lutsha kwiindonga zekhethini lisekwe kumgaqo-siseko wokubambeka ngokuthe nkqo nge-cylindrical endaweni yeeprofayile ezingunxantathu. Le ndlela yokubonisa ngokuqinisekileyo ithetha ukuba ukwakhiwa okunokudityaniswa kwezinto ezininzi kungongeza, kuphindwe kabini ukudityaniswa kwejometri kwindibano yeglasi yodonga. IGLASWAVE yinkqubo yokunyuka kwezinga eliphantsi eyenzelwe ukuthengisa izakhiwo ezihlukileyo zamagumbi amathathu okanye ngaphantsi (iiholo ezinkulu, amagumbi okubukisa, iitrium njl.)
Vivit Collection Amacici Kunye Neringi Saturday 16 October
Bridal Veil I-Chandelier Friday 15 October
FinaMill Smart Ekhitshini Lokusila Thursday 14 October
Iwotshi Ukutya Okondla Ukutya Inkqubo Yodonga Oluninzi Oluninzi Ukuvelisa / Ukuvelisa Emva / Ukusasaza Umthwalo Wevili I-Usb Flash Drive